Dr. Tint Swe's Writings: May 2016
ဆရာရှင့် သမီးအမေ သည်းခြေအိတ် ထုတ်လိုက်ရပါတယ်ဆရာ။ သည်းခြေအိတ်မှာ ကျောက်မဟုတ်ဘဲ အသားလုံး အသေးလေ သုံးလုံးဖြစ်နေပါတယ်။ ဘိုင်အိုစီ စစ်ကြည့်တဲ့အဖြေက ကင်ဆာလို့ပြောပါတယ်။ ကင်ဆာဆို သမီးအမေ သက်တန်းစေ့နေနိုင်ပါ့မလားဆရာ။ ဘယ်လိုတွေဆက်လုပ်သင့်ပါသလည်းရှင့် ဘိုင်အိုစီ စစ်ထားတာကို ဆရာကို ပြခြင်လို့ပါ။ စိုးရိမ်ရပါသလားရှင့်။ အခုတော့ သည်းခြေအိတ်ခွဲထုတ်ထားတာ5ရက်ရှိပါပြီ ပိုးသတ်ဆေးထိုးတာတောင် နာလို့ ငိုပါတယ်ဆရာ။ အမေက ဆရာကိုမေးပေးပါတဲ့ လေးစားစွာဖြင့်။
သည်းခြေအိတ်ကင်ဆာ အဖြစ်မများပါ။ ဖြစ်တာကိုစောစောသိလို့ကုသရင် အလားအလာကောင်းတယ်။ ကံမကောင်းတာက နောက်ကျမှ သိတာများတယ်။ ရောဂါသိဘို့လုပ်ရတာလည်းခက်တယ်။ တိကျတဲ့ရောဂါလက္ခဏာ မရှိသလို ဖြစ်လို့ပါ။ ဗိုက် (ညာဖက် အပေါ်ပိုင်း) အောင့်မယ်။ ရင်ပြည့်သလိုနေမယ်။ ယားမယ်။ ဖျားမယ်။ ပျို့မယ်။ အစားအသောက် ပျက်မယ်။ ပိန်လာမယ်။ အသားဝါမယ်။
Adenocarcinoma အမျိုးအစားကင်ဆာဖြစ်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာပိုဖြစ်တယ်။ အသက်ကြီးလေဖြစ်နိုင်လေ။ အရင်က သည်းခြေကျောက်ရာဇဝင်ရှိနိုင်တယ်။
ultrasound, computerized tomography (CT) နဲ့ magnetic resonance imaging (MRI) တွေရိုက်စစ်ဆေးမယ်။ ဗိုက်ခွဲပြီးစစ်ဆေးရတာလည်းရှိနိုင်တယ်။ laparoscopy ကိရိယာထည့်ပြီး အခြေအနေကို စစ်နိုင်တယ်။ သည်းခြေလမ်း ထိုးဆေးစစ်ဆေးနိုင်တယ်။
Stage I သည်းခြေအိတ်ရဲ့အတွင်းလွှာမှာသာရှိသေးတယ်။
Stage II သည်းခြေအိတ်ရဲ့အပြင်လွှာရောလာမယ်။ ဘေးလည်းရောက်နိုင်တယ်။
Stage III အနီးအနားအင်္ဂါ (အသည်း၊ အူသိမ်၊ အစာအိမ်) ဆီရောက်နေပြီ။ တက်စေ့ထိရောက်မယ်။
Stage IV တခြားနေရာတွေအထိရောက်နေပြီ။
သည်းခြေအိတ်ကင်ဆာကုသနည်းတွေကို ကင်ဆာအဆင့်နဲ့ လူနာကျန်းမာရေးအရရွေးရတယ်။ ခွဲစိတ်နည်းက အစောဆုံးအဆင့်အတွက်ကောင်းတယ်။ သည်းခြေအိတ်တခုတည်းဖြစ်ဖြစ်၊ အသည်းတစိတ်တပိုင်းဖြစ်ဖြစ် ထုတ်ပေးရတယ်။ တချို့မှာ ခွဲပြီး ကင်ဆာဆေးလိုမယ်။ နောက်ကျတာဆိုရင် ကင်ဆာဆေးနဲ့ ဓါတ်ကင်တာလုပ်ရမယ်။
တချို့ကခွဲတာကိုခံနိုင်ရည်မရှိကြပါ။ ခွဲစိတ်ကုသနည်းဟာ စောလေကောင်းလေဖြစ်တယ်။ သည်းခြေအိတ်တခုလုံး ထုတ်နည်း၊ အသည်းအစိတ်အပိုင်းတခုကိုပါထုတ်နည်း၊ သည်းခြေရည်လမ်းကိုပါထုတ်နည်းရှိတယ်။
ကင်ဆာဆေးပေးဘို့လို မလိုနဲ့ ဓါတ်ကင်ဘို့ လို မလိုကိုလည်း လူနာအခြေအနေအရ ဆရာဝန်ကဆုံးဖြတ်မယ်။
ကင်ဆာနောက်ကျနေရင် ကင်ဆာဆေးပေးမယ်။ therapy ဓါတ်ကင်ပေးမယ်။ သည်းခြေရည်လမ်းပိတ်နေတာကို တခုခုလုပ်ပေးရတယ်။Stent စတန်းထည့်ပေးနည်းနဲ့ Biliary bypass ဘိုင်ပတ်စ်နည်းရှိတယ်။
အလားအလာ (၅) နှစ်အသက်ရှင်နှုန်း
အဆင့်0= 80%
အဆင့် I = 50%
အဆင့် II = 28%
အဆင့် IIIA = 8%
အဆင့် IIIB = 7%
အဆင့် IVA = 4%
အဆင့် IVB = 2%
နှာခေါင်းထဲက သွေးပြန်ကြောလေးတခုခုပေါက်ခြင်း၊ ကြောက်ရန်မလို၊ အိမ်မှာပင်ကုသနိုင်။
ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ နှာခေါင်းကို ဆွဲလိမ်ခြင်း၊ နှာခေါင်းဒဏ်ရာရခြင်း၊ (အက်စ်ပရင်)၊ နှာခေါင်းထဲ တခုခုဝင်ခြင်း၊ ထိခိုက်မိခြင်း၊ မတည့်ဖြစ်ခြင်း၊ ပိုးဝင်ခြင်း၊ သွေးဖိအား (BP) တက်ခြင်း၊ သွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ သွေးခဲရောဂါ၊ (ကိုကိန်း) ဆေး။
နှာခေါင်းနောက်ပိုင်းမှ ထွက်သည်။ နှာခေါင်းနောက်၊ အာခေါင်သို့ ထွက်မည်။ အသက်ကြီး၊ သွေးဖိအား (BP) များသူများ ဖြစ်တတ်၊ ဆိုးဝါးနိုင်သည်။
• ကလေးဖြစ်ပါက အာရုံပြောင်းပေးပါ။
မတော်တဆဖြစ်ခြင်း၊ ဒဏ်ရာရခြင်း၊ သွားနှုတ်ခြင်း၊ ဆေးကုနေစဉ်ဖြစ်ခြင်း၊ နေမကောင်းစဉ် ဖြစ်ခြင်း၊ Hemophilia, Scurvy, Cancer, Thrombocytopenia, A plastic Anemia, Leukemia, Peptic Ulcer, Platelet Disorder, Liver Disease, Septicemia စသည့်ရောဂါများ၊
ဒဏ်ရာ၊ အနာတို့မှ သွေးထွက်ခြင်း၊ သွေးခြည်ဥဖြစ်ခြင်း၊ ပါးစပ်၊ နှာခေါင်း၊ စအိုတို့မှ သွေးထွက်ခြင်း၊ ဆီးထဲ သွေးပါခြင်း၊
မြန်မာပြည်ထဲကနေ လျှပ်စစ်မီးအကြောင်းတွေဖတ်နေရတယ်။ ကျွန်တော်ပါ ဓါတ်ကူး (ဓါတ်လိုက်မဟုတ်) သွားပြီ။
• လူနာကို တိုက်ရိုက်ဆွဲထုတ်ဖို့ မကြိုးစားရ။
• မီးခလုပ် ပိတ်ပါ။
• လိုအပ်ပါက CPR (စီပီအာရ်) လုပ်ပါ။ အသက်မရှူလျှင် ပါးစပ်ခြင်းတေ့ပြီး လေမှုတ်သွင်းပေးပါ။ နှလုံးမခုန်လျှင် ရင်ပတ်ဖိနည်းလုပ်ပါ။ အကူအညီတောင်းပါ။
High Voltage စွမ်းအားများလျှပ်စစ်ကနေ (၁၈) မီတာအထိ ခုန်ထွက်၊ ကွေးကောက်သွားေးစေနိုင်တယ်။ မီးလာရာကို မပိတ်မီ ဖြစ်သူအနားမကပ်ပါနဲ့။ (၂၅) မီတာအကွာကနေပါ။ Low voltage စွမ်းအားနိမ့်လျှပ်စစ်ကနေဖြစ်ရင် ပင်မမီးခလုတ် ပိတ်ပါ။ မီးကြိုးစတာတွေဖယ်ရှားပါ။ ကယ်မယ့်သူက မြေကြီးအစိုဓါတ်နဲ့ကင်းအောင် ခြောက်သွေ့တဲံ သစ်သားပြား စက္ကူ၊ ရာဘာလိပ်၊ ဖြာ၊ ကော်ဇောပေါ်မှာနေရာယူပါ။ လျှပ်စစ်မလိုက်နိုင်သော သစ်သား၊ ဝါး၊ တံမြက်စီး၊ သတင်းစာစက္ကူလိပ်၊ ပလပ်စတစ်စသည်ဖြင့် ဖယ်ရှားဖြစ်ပါ။
လူနာအခြေအနေကိုချက်ချင်းစစ်ဆေးပါ။ နာမည်ခေါ်ပါ။ အသံကျယ်ကျယ်ပေးမေးပါ။ မျက်လုံးဖွင့်ခိုင်းပါ။ အသံကြားသလားမေးပါ။ ကိုယ်ကိုလှုတ်ကြည့်ပါ။ တတ်ကျွမ်းအကူအညီမလာမီ လူနာကို လိုအပ်မှသာ နေရာရွေ့ပါ။
ပါးစပ် + နှာခေါင်းမှာ ပိတ်ဆို့နေသလားစစ်ပါ။ မေးကိုရှေ့ (အပေါ်) မ တင်ပါ။ ခေါင်းနောက်လှန်ထားပါ။ လည်ပင်း လေပြွန်တန်းပြီးပေါ်လာစေရမည်။ အပေါ်ကနေကျလို့ ခါးရိုးထိခိုက်တာလည်း သတိထားပါ။ အသက်ရှူနေ မနေ စစ်ဆေးပါ။ ရင်ပတ်နိမ့်မြင့်နေ မနေ။ အသက်ရှူသံ ကြား မကြား။ နှာခေါင်းဝကနေ လေအထွက် မိမိလက်ဖမိုးနဲ့စမ်းပါ။ အသက်ရှူနေရင် နေရာမှန်ပြန်ထားပါ။ အသက်မရှူရင် အသက်ရှူ CPR နည်းအရ ပါးစပ်ချင်းတွေပြီး လေသွင်းပေးပါ။
သတိလစ်နေပြီး အသက်မရှူရင် နှလုံး CPR လုပ်ပါ။ လူနာကို ပြင်ညီမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာထားပါ။ လူနာရင်ပတ် အလယ်တည့်တည့်မှာ မိမိလက်ဖမိုးနှစ်ခုထပ်တင်ပြီး (၄-၅) စင်တီမီာနိမ့်ကျစေအောင် ဖိချပါ။ တမိနစ်မှာအကြိမ် (၁ဝဝ) နှုန်း။ အကြိမ် (၃ဝ) ဖိချပြီးတိုင်း ယခင်းနည်းအတိုင်း အသက်ရှူလမ်းပြန်စစ်ပါ။ နှာခေါင်းကို မိမိလက်တဖက်နဲ့ပိတ်ထားပြီး ပါးစပက်ခြင်းတေ့ထားပြီး လေမှုတ်သွင်းပါ။ တကြိမ်လေသွင်းပြီးတိုင်း အသက်ရှူပါ။ (၂) ကြိမ် ထိထိရောက်ရောက် လေမှုတ်သွင်းပါ။ ရင်ပတ် နိမ့်ချည်မြင့်ချည်မဖြစ်သေးရင် ရင်ပတ်ဖိနည်း (၃ဝ) ထပ်လုပ်ပါ။ ၁-၂-၃-၄-၅ တချည် (၆) ခါ။ မရသေးရင် Defibrillation ကိရိယာသုံးဘို့လိုလာပြီ။
မီးလောင်ဒဏ်ရာရှိရင် သတိရနေသူကို ရေအေးနဲ့ ၁ဝ မိနစ်ကြာထိတွေ့စေပါ။ သတိလစ်နေသူကို ရေအေးဝတ် ကပ်ထားပေးပါ။ မီးလောင်ဖူးကိုမဖေါက်ပါနဲ့။ ရှေးဦးသူနာပြု ပိုးသေဆေးဆေးထည့်ပေးပြီး ကပ်စရာနဲ့ဖုံးအုပ်ထားပါ။
ချွန်ထက်ရှတဲ့အရာတွေဖယ်ရှားပါ။ စိတ်ချရတဲ့လူနာကိုနေပုံစံထားပါ။ အနီးဆုံးလက်တဖက်ကို ကိုယ်နဲ့ ၉ဝ ဒီဂရီထားပါ။ ကျန်လက်တဖက်ကို ရင်ပတ်ပေါ်တင်ထားပါ။ လက်ဖမိုးကရင်ပတ်နဲ့ကပ်ပါစေ။ ဒူးကိုအနေတော်ပြင်ထားပါ။ တခြား ထိခိုက်ဒဏ်ရာစစ်ဆေးပါ။ ကြွက်သားတုန်ခါမှုနဲ့ တက်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ ခေါင်းအောက်က အနေတော်တခုခု ခံထားပေးပါ။ အဝတ်အစား အနေတော်ပြုပြင်ပေးပါ။ လူနာပါးစပ်ထဲ ဘာမှမထည့်ပါနဲ့။ စောင်စတာ လိုအပ်ရင်ခြုံပေးပါ။
လူကြီးမင်း လူ့အသက်တချောင်းကို ကယ်လိုက်ပြီ။ Well done!
ကျနော်အသက် ၂၄ နှစ်ပါ။ ကျနော်မှာ ဒေါသနဲ့ စိတ်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတခုရှိပါတယ်။ စိတ်ကလဲ တခုခုကိုအလိုမကျတာနဲ့ ဒေါသတွေအရမ်းထွက်တတ်ပါတယ်။ ကိစ္စတခုဖြစ်လာရင်လဲ မကောင်းတဲ့ အမြင်နဲ့ တွေးတတ်ပါတယ်။ ကျနော်ရဲ့ဒေါသစိတ်မထိန်းနိုင်မှုကြောင့် မိသားစုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကြားမှာ အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။ ကျနော်ဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်ကို မိသားစုအပါဝင် မိတ်ဆွေအပေါင်းသင်းတွေလဲ နားမလည် မပေးကျဘူးလို့ ကျနော်စိတ်ထဲမှာထင်နေပါတယ်။ ကျနော်ကိုကျနော်လဲ သာမန်လူရဲ့စိတ်အခြေနေမရှိဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်။ psycho ပုံစံလိုမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဆရာ။ မူးယစ်ဆေးဝါးလဲမသုံးပါဘူး။ အခြားလူနဲ့ မတူတာ က ကျနော်က အရမ်းပူအိုက်နေရင် သို့ မဟုတ် ဒေါသထွက်ပြီးစိတ်အလိုမကျရင် ချွေးအရမ်းထွက်တတ်ပါတယ်။ ဘယ်လို ကုသမှု ဘယ်လို ဆေးဝါးတွေကို သောက်သုံးရမလဲဆိုတာ ဖြေကြားပေးပါခင်ဗျာ။ ပြီးတော့ 5-HTP ဆိုတဲ့ဆေးရဲ့ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးကို သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆေးပုံစံကို ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
စိတ်အထူးကုဆရာဝန်နဲ့ စနစ်တကျကုသမှုခံယူတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
5-HTP စိတ်ဆေးဆိုတာ ဆေးဝါးဗေးအရ 5-hydroxytryptophan ခေါ်တယ်။ Griffonia simplicifolia အပင် အစေ့ကနေ ထုတ်ယူထားတဲ့ဆေး ဖြစ်တယ်။ စိုးရိမ်စိတ်ကဲခြင်း၊ စိဓါတ်ကျခြင်းနဲ့ အာရုံကြောကြောရောဂါတချို့ကိုသုံးတယ်။ ထိရောက်မှု အတိုင်းအတာ တခုအထိ ရှိတယ်။ Serotonin (ဆီရိုတိုနင်) ဓါတ်နည်းနေသူတွေမှာ ကောင်းစေတယ်။ စိတ်တိုလွန်းသူတွေကိုလည်းပေးနိုင်တယ်။ စားချင်စိတ်နည်းအောင်လည်း သုံးကြတယ်။ စိတ်ဓါတ်ကျသူကို 5-HTP 200 ကနေ 300 mg/day ကို တနေ့မှာ ၃-၄ ကြိမ်ခွဲပေးတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့ ပျို့-အန်ချင်၊ ဝမ်းပျက်၊ ဗိုက်အောင့်၊ ခေါင်းနည်းနည်းကိုက်၊ အိပ်ရေးပျက်တာဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ ကလေးနို့တိုက်ချိန်အတွက် စိတ်ချရမှုအထောက်အထား မပြည့်စုံသေးပါ။
၁။ Panic Disorder ဆောက်တည်ရာမရဖြစ်ခြင်း
Alprazolam 0.25 to 0.5 mg တနေ့ ၂-၃ ကြိမ်သောက်ပါ။ လိုအပ်ရင် ၃-၄ ရက်နေတော့ ဆေးအလေးချိန်ထပ်တိုးပါ။ တနေ့မှာ အများဆုံး စုစုပေါင်း4mg ထက်မပိုရ။
၂။ Panic Disorder ဆောက်တည်ရာမရဖြစ်ခြင်းနဲ့ Depression စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း
Alprazolam 0.5 mg တနေ့ ၃ ကြိမ်။ ၃-၄ ရက်တကြိမ်တိုးပေးနိုင်တယ်။ ကောင်းလာရင်5to6mg နေ့စဉ်ခွဲပေးပါ။
Government Policy အစိုးရပေါ်လစီ (သို့) ပညာရှင်များသည် တိုင်းပြည်ကို အကျိုးပြုပါသလား
သတင်း (၁) = အစိုးရသစ်တွင် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားရေးမူဝါဒမတွေ့ရဟု ရန်ကုန် လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးဖိုရမ်တွင် တက်ရောက်သည့် ပညာရှင်များက ဝေဖန်
သတင်း (၂) စင်ကာပူတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဖိုရမ်တွင်လည်း အစိုးရသစ်မှာ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြင့်ပင် အချိန်ကုန်နေသည်ဟု မြန်မာပညာရှင်အချို့မှ ဝေဖန်
အစိုးရသစ်မှာ ဘာပေါ်လစီမှမရှိဘူးလို့ ပြောသံတွေကြားရတယ်။ ပြောကြသူတွေရဲ့ဝေါဟာရ အတိအကျတော့ မသိပါ။ လူတွေဘာပြောတယ်ဆိုတာ စကားလုံးအတိအကျသိဘို့မလိုပဲ သဘောပေါက်တာမျိုးရှိတယ်။ ကြားကောင်းအောင် ရွေးပြောမှန်းလည်းသိနိုင်တယ်။ မျက်နှာအမူအယာနဲ့လည်းသိတယ်။ တခါတခါ မျက်နှာကြည့်စရာမလိုပဲ ဘယ်သူကဆိုတာနဲ့ ဘာလာမှာကိုသိနေတတ်တယ်။ ဘယ်သူ့မျက်နှာမှ မထောက်ပြောတဲ့ သူမျိုးတွေဆိုတာလည်း ဘယ်အစိုးရတက်တက်ရှိတယ်။ အရင်ကတော့ ဘေးထိုင်ဘုပြောဆိုသူတွေ။ အခုတော့့
ပေါ်လစီဆိုတာဘာလည်း။ အစိုးရပေါ်လစီဆိုတာဘာလည်း။ အခုဝေဖန်ပြစ်တင်နေသူတွေက ပညာရှိပရောဟိတ်တွေဆိုတော့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပါမှရမယ်။ အဲတော့ စာအုပ်တွေလှန်ရတယ်။ ဘိုလိုစာလုံးလေးတွေလည်းပါရမယ်။ ပေါ်လစီဆိုတာ အဖွဲ့အစည်းတခုခုရဲ့ ချမှတ် (သို့) ကိုင်စွဲတဲ့ မူ၊ လမ်းစဉ် (သို့) ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့ဆိုပါတယ်။ ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေ၊ ဥပဒေတွေ၊ အသင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာတွေကို အသုံးပြုပြီး ပေါ်လစီချရတယ်။ အချက်အလက်ပေါင်းများစွာကို အခြေပြုရပေမယ့် အဓိကလွှမ်းမိုးတာကတော့ သမိုင်းနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်တယ်။ ဘိုလိုရေးတဲ့ စာအုပ်ကြီးတွေ မဟုတ်ပါ။
ပေါ်လစီဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရာမှာ လမ်းညွှန်ဖြစ်တယ်။ အကျိုးရလဒ်ကောင်းစေမယ်။ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေမယ်။ သည်ဟာကို သည်လိုလုပ်မယ်။ ဘယ်တော့မှာ ဘာကြောင့်လုပ်ရတယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။ အဆင့်ဆင့်လုပ်ရတဲ့ (ပရိုစီဂျာ) တွေနဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့ ကျင့်ဝတ် (ပရိုတိုကောလ်) တွေရှိမယ်။
အပြောင်းအလဲတခုကို ဘယ်ကနေစမလည်းဖြစ်တယ်။ အခွန်နှုန်းထား၊ လစာ-လုပ်ခနှုန်းထား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ ပင်စင်၊ လူမှုဖူလုံရေး၊ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း၊ ကြိုးနီစနစ်၊ စတာတွေပါမယ်။ ပေါ်လစီဆိုတာ ဥပဒေမဟုတ်ပါ။ အခြေအနေအရပြင်ရတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်းက သူ့အတွက် ၁ဝဝ% ရချင်ကြတယ်။ အဲတာကြောင့် ကွန်မြူနတီမှာ ပါနေသူတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက အရေးပါတယ်။ ဝေဖန်ရေး၊ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ရေး၊ တိုင်းတာတောတာတွေ ကိုသာ ပြောတာမဟုတ်ပါ။ အပြုသဘောအကြံပြုတာ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာလည်းပါရတယ်။
(အိုင်ဒီယာ) တွေကို လက်တွေ့အဖြစ်ပြောင်းစေတာ ပေါ်လစီဖြစ်တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကနေ အများစုဆီက (မင်းဒိတ်) ခေါ် လုပ်ပိုင်ခွင့်သာမက၊ ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ လူတွေဆီက (အိုင်ဒီယာ) တွေရတယ်။ NLD အစိုးရရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ (ကင့်ပိန်း) ကြီးမားကျယ်ပြန့်ခဲ့တာ ပြောဘို့မလိုပါ။ အဲတော့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူများစုလိုအင်ဆန္ဒကို ကောင်းကောင်းသိတယ်။
(ပတ်ဘလစ် ပေါ်လစီ) အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တာမှာ ရှုတ်ထွေးတာသာမက အမြဲပြောင်းလဲမှု (ဒိုင်းနစမစ်) ဖြစ်နေရတယ်။ အသေဆုပ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပါ။ လူတွေရဲ့ပြဿနာတွေက အချိန်တိုင်းမှာ မတူပါ။ အဆုံးလည်းမရှိပါ။
အစိုးရပေါ်လစီအပေါ်လွှမ်းမိုးလိုသူတွေက ချဉ်းကပ်နည်း၊ (လော်ဘီ) နည်း စတာတွေနဲ့ကြိုးပမ်းကြရတယ်။ စင်ပေါ်တက်၊ ပြည်ပထွက် အပြစ်ချည်းပြောနည်းကတော့ အကျိုးမပြှုပါ။ လူတန်းစားအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အခွင့်အရေးအသင်းအပင်းတွေ၊ (အင်းထရက်စ်) အစုတွေနဲ့ ဆက်စပ်မှုလုပ်တယ်ဆိုတာကလည်း တခါတည်းပြီးသွားတာမျိုး မဟုတ်ပါ။ အဲတော့ အစိုးရတက်စမှာ မသိတာမမြင်တာကိုသာကြည့်ပြီး ကောက်ချက်ချတာမှာ လွန်ရောကျွံရော မဖြစ်သင့်ပါ။ (အကဲဒမစ် ပရင်စပယ်) စည်းကမ်းဆိုတာရှိတယ်။ လူမှုရေးသိပ္ပံထဲက အယူအဆတွေပါ။ စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေး၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ သုံးသပ်နည်း၊ တိုင်တာနည်းစတာတွေပါရတယ်။ ဒါလည်း စာအုပ်ကြီးထဲပါ။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးက စာမျက်နှာသစ် ဖွင့်ကာစရှိသေးတာ။
တချို့က (အိုင်ဒီယော်လော်ဂျီ) ခေါ် ဝါဒရေးအယူအဆကို ပေါ်လစီနဲ့ ကွဲမြင်ဘူး။ တချို့က (၅) နှစ်စီမံကိန်းကိုသာ ပေါ်လစီထင်တယ်။ ဦးနုလက်ထက်က ပြည်တော်သာစီမံကိန်းကြောင့် ကျွန်တော့်ဇာတိရွာကလေးမှာ မူလတန်းကျောင်းရခဲ့တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းရဲ့ နှစ်ရှည်နှစ်တိုစီမံကိန်းတွေက သတင်းစာတွေမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ စစ်အစိုးရတွေမှာကော ဘာပေါ်လစီလည်းမေးရင် ဖြေရမှာအားနာတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရပေါ်လစီ ဆိုတာကို ထောက်ပြဘို့ စိတ်ကူးခဲ့ကြဘူးပါသလား။ NLD အစိုးရကနေ သတင်းစာမျက်နှာဖုံးမှာ မထည့်တာနဲ့တော့ ပေါ်လစီမရှိဘူးလို့ မပြောသင့်ကြပါ။
ပညာရှင်လူတန်းစား တိုင်းပြည်ကိုအကျိုးပြုပါသလားလို့ အမေးခံရတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်မလာပါစေနဲ့။
အခုလေးတင် ကျွန်တော့်ဖရင်းထဲက တိုင်းရင်သားလူမျိုးတယောက်ကနေ သူနဲ့လူမျိုးတူ နာမည်ရနိုင်ငံရေးထဲက တယောက်အကြောင်းရေးတာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ အဲဒီနာမည်ရ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တယောက် လူမျိုးတူ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တဦး နေရာရတာကို အရင်တခါပြစ်တင်သံနဲ့ မီဒီယာကနေပြောထားပြီး အခုတခါ လေသံ ပြောင်းတယ်လို့ ထောက်ပြထားတယ်။
ကျွန်တော်လည်း မနက်ကပါပဲ တိုင်းပြည်အထင်ကရခေါင်းဆောင်ကို မီဒီယာကနေ အကြိမ်များစွာ ဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့တဲ့ တခြားတိုင်းရင်းသားနာမည်ရတယောက် လေသံပြောင်းပြောပြန်တာ ကြားလိုက်ရသေးတယ်။
မြန်မာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုအရ ကျွန်တော်ကတော့ နာမည်တွေဘာတွေ ရေးလို့၊ ပြောလို့မဖြစ်ပါ။ ဗမာကနေ တိုင်းရင်းသားကိုပြောမိရင် ကျိန်စာသင့်သလိုခံရတတ်တယ်။ နယ်စပ်တွေမှာတုန်းကတော့ တိုင်းရင်းသားပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းနဲ့ ဆက်ဆံရတာ အတော်အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ အခုအခြေအနေက တမျိုးပဲဗျ။
- Yown Layy ဆရာ့ကိုကျန်းမာရေးအတွက်မေးချင်ပါတယ်ရှင့် ဘယ်လိုမေးရပါမလဲရှင့်
- Ju Ju ဆရာဆေးခန်းဘယ်မှာထိုင်ပါသလဲ လိပ်စာလေးသိချင်ပါတယ်
- Suelay Nwe ဆေးခန်းဘယ်မှာထိုင်လဲ သိချင်လို့ပါဆရာ လိပ်စာလေးပြောပြပေးပါလား
- Mee Mee ဖတ်မရဘူးဆရာ
- Ayethi Khaing ဖတ်မရဘူးဆရာ
ဆောရီး။ ဆောရီး။ ဆောရီး။ မေးနည်းစည်းကမ်းကို Like လုပ်သလိုလုပ်ရချင်တယ်။ (ကလစ်) လုပ်တာနဲ့ပြီးသွားနိုင်တာ လုပ်ပေးကြပါဗျာ။ အဲလိုလာတိုင်း ပို့ပေးနေရတာ တကယ်ကို (ဘုရားစူး) မနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။
ဘယ်မှာနေလည်းပြောရတာ သိတဲ့လူတွေကို အားနာလှပြီ။ ကျွန်တော် ၁၉၉ဝ ခုနှစ်အကုန်ကတည်းက နိုင်ငံရေးကြောင့် မြန်မာပြည်ကနေ ထွက်ပြေးခဲ့ရတာ၊ ခုထိမပြန်နိုင်သေး၊ ဆေးခန်းလည်း မရှိတော့ပါ။
ဖတ်မရတဲ့ (လင့်ခ်) ကတော့ ဟုတ်တယ်။ ကျွန်တော် ဆေးပညာစာတွေ၊ တခြားစာတွေရေးနေတာ Blog (ဘလော့ဂ်) ပေါ်စကတည်းကပါ။ အဆင်မပြေလို့ (ဘလော့ဂ်) တွေအသစ်လုပ်ရတာလည်း (၁ဝ) ကြိမ်လောက်ရှိမယ်။ အခုနောက်ဆုံးတခုကတော့ အဆင်ပြေနေတာ အတော်ကြာပြီ။ (ဘလော့ဂ်) အဟောင်းက (လင့်ခ်) တွေနဲ့ အစားမထိုးနိုင်သေးပါ။ အချိန်ကမရလို့ ဂွကျနေတယ်။ ကြိုးစားပါအုန်းမယ်။ ဖတ်ချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကို မြန်မာလို၊ အင်္ဂလိပ်လို Search ရှာဖွေစရာမှာရိုက်ရှာရင် ၈ဝ% လောက်ရပါမယ်။ မရရင် ခေါင်းစဉ်ကိုပြောပြီး မေးနည်းစည်းကမ်းအရ မေးသူတိုင်းဆီကို (လင့်ခ်) ဖြစ်ဖြစ် စာတပုဒ်လုံးဖြစ်ဖြစ်ပို့ပေးနေပါတယ်။
အိန္ဒိယမှာနေခဲ့စဉ်က မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် လက်တွဲလုပ်ခဲ့သူတွေထဲကတယောက်ဖြစ်တဲ့ Dr. Alana Golmei (မပန်းနု) ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ (၄) နှစ်တိတိက မိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းလို့ ဖေ့စ်ဘွတ်ကအသိပေးတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ ပုံထဲပါ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်အားလုံးကို အထူးသတိရပါတယ်။
India and Myanmar: Pitching for Greater Connectivity
Venue: Abdul Nazir Sab Hall, Institute of Social Sciences, New Delhi
• ဂရိခေတ်က သမားတော်ကြီး Hippocrates (ဟစ်ပိုကရေးတီးစ်) ကို Father of Medicine ဆေးပညာဖခင်ကြီးအဖြစ် ဆေးလောကတခုလုံးက အသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်။ ဆေးပညာသုံးဝေါဟာရတွေ အတော်များများကို ဂရိ၊ လက်တင်စာလုံးတွေကနေ ယူသုံးတယ်။ ဆရာဝန်တွေက Zodiac Signs ဆယ်နှစ်ရာသီခွင်ရုပ်တွေကိုလဲ ယူသုံးတယ်။ နက္ခတ်ဗေဒင်၊ ဇာတာခွင်တွေမှာသုံးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Cancer ကင်ဆာရဲ့သင်္ကေတက ပုစွန်လုံး၊ ဂဏန်း၊ မြန်မာအခေါ် ကရကဋ်ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ထည်မှာ ခြေထောက်တွေ အများကြီးပါတယ်။ ကင်ဆာရောဂါမှာလဲ တနေရာမှာဖြစ်နေတာက ခြေထောက်ပေါက်သလို ပျံ့နှံ့ရောက်သွားလို့ ဒီသင်္ကေတကိုယူတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယမှာ ပါးစပ်ထဲမှာငုံရတဲ့ဆေးတမျိုး Kuber (ကူဘဲ) ဆိုတာရှိတယ်။ ဒီငုံဆေးထဲမှာ Tobacco ဆေးပါလို့ ကင်ဆာဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့ သတိပေးစာနဲ့မှသာ ရောင်းခွင့်ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် (ကူဘဲ) အထုပ်ပေါ်မှာ Tobacco kills စာနဲ့အတူ Scorpio ကင်းမလက်မဲပုံ ရိုက်ထားတယ်။ ကင်ဆာကိုသတိပေးတာဖြစ်ပေမဲ့ Scorpio ကင်းမလက်မဲဆိုတာလဲ ဆယ်နှစ်ရာသီခွင်ရုပ်တွေထဲမှာ သပ်သပ်ပါတယ်။ Scorpio ကင်းမလက်မဲ၊ ကင်းမြီးကောက်ဆိုတာ မြန်မာအခေါ် ဗြိစ္ဆာဖြစ်တယ်။ ကင်းမလက်မဲ၊ ကင်းခြေများ၊ ကင်းပုစွန်၊ ကင်းမြီးကောက်စတဲ့ ကင်းတွေမှာလဲ အဆိပ်ပါလို့ ရောဂါရစေတာပါဘဲ။ ကင်ဆာနဲ့တော့ မတူပါ။
ဆေးလိပ်ဖြတ်စေဘို့သတိပေးကြော်ငြာစာတွေမှာ ကလေးသူငယ်တွေကို အထောက်အထားတွေနဲ့အတူ ဖေါ်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ အဲတာကထိရောက်မယ်ယူဆလို့ပါ။ ကလေးတွေဟာ ဆေးလိပ်မသောက်ကြပဲ ဆေးသောက်သူတွေဆီက ဆေးလိပ်ငွေ့ကိုရှူရတာနဲ့ ဒုက္ခရောက်ကြရတယ်။ ချောင်းဆိုးမယ်။ ရင်ကျပ်မယ်၊ နေမကောင်းဖြစ်မယ်။ ဆေးလိပ်သောက်သူ လူကြီးမိဘတွေဆီက မကောင်းတဲ့အကျင့်ရစေမယ်။ ကမ္ဘာမှာ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့မိခင် (၃၃) ယောက် နေ့စဉ်သေဆုံးနေတယ်။ အဲတာကြောင့် တနှစ်မှာ ကလေးပေါင်း (၁၂ဝဝဝ) ယောက် အမိမဲ့ဘဝနဲ့ကျန်ရစ်နေရတော့တယ်။
ကမ္ဘာ့ တိုဘက်ကို (ဆေးလိပ်) ပပျောက်ရေးနေ့ ၂ဝ၁၆
• ဆရာ့ဆီ ပေးစာတဲ့။ ဒီဗီဘီကို ပို့ထားတယ်။
• ကြာပြီနော် ဘာလည်းတောင် မမှတ်မိတော့ဘူးဗျ။
• မိတ်ဆွေများသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ (၁)
အစိုးရအသစ်၊ မူဝါဒနဲ့ စင်တင် မူဝါဒ သုတေသီများအကြောင်း
အင်န်အယ်ဒီ အစိုးရအသစ်မှာ မူဝါဒမရှိဘူးလို့ စင်္ကာပူမှာလုပ်တဲ့ မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေးပွဲမှာ ပညာရှင်တွေက အစိုးရ အသစ်အပေါ် ဝေဖန်ကြတဲ့သတင်းကို မီဒီယာတွေပေါ်မှာ ဖတ်လိုက်ရသဗျ။
• ဘယ် တင်မောင်သန်း လဲတော့ မသိ။
• အော့့် အဲလို အကိုလေးလို့ရေးရင် သင့်ဘဝ။ ကျွန်တော် မဖတ်ရသေးဘူး။
• မနက်ဖန် ဒီဗီဘီဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှာ တင်ပါမယ်။
• အော် စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။ ဘာတွေရေးမလည်းတော့ မသိဘူး။ ရေးတာကောင်းတယ်။ လူအများသိရတာပေါ့။
ဒေါက်တာတင်မောင်သန်း (သင့်ဘဝ) က ကျွန်တော်ညီတွေ နှမတွေလိုပဲ ကျွန်တော့်ကို အကိုလေးလို့ပဲခေါ်တယ်။ သူနဲ့ ၁၉၈၈ ကတည်းက မုံရွာက သူ့အိပ်မှာဆုံရာကနေစတယ်။ ကိုကျော်ဝင်း (စာရေးဆရာ) လည်းပါတယ်။ ကျွန်တော်က နားထောင်သမားပါ။ သူနဲ့က စကားပြောရင် နိုင်ငံရေးပဲပြောကြတယ်။ ကျန်းမာရေးမပါပေမယ့် စင်္ကာပူပညာရေးအကြောင်း ပြောဖြစ်ကြတယ်။ သူက စာဖတ်တာ စာရေးတာ ကျွန်တော့်ထက် စောတယ်။ ကျွန်တော်က အဲဒီလောကထဲကို နောက်မှသာရောက်လာသူ။
ညကတည်းက စိတ်ထဲကူးမိနေတာ။ မေးခွန်းတွေကိုဖြေပေးပြီး၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြန်ရေးဖေါ်ရတာ မနေ့ကတော့ သိသိသာသာများတယ်။
တချို့ကတော့ မေးချင်တုန်းကတော့ ဖုတ်ပူမီးတိုက်၊ ကွန်မင့်ကနေမေးပြီး ဖြေတာကိုတော့ဖတ်ပုံမရဘူး။ တချို့လည်း မေးနည်းမကျလို့ စည်းကမ်းပို့ပေးပြန်တော့ ပို့ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သာရေးတယ်။ မေးခွန်းကို စနစ်တကျ ပြန်မမေးကြတော့ဘူး။
အမျိုးမျိုးမှ တကယ့်အမျိုးမျိုး။ ကိုယ့်တိုင်ပြည်သားတွေဆိုတော့လည်း အမျိုးပဲပေါ့။ ကနေ့မနက် အီးမေးလ်ကနေပြန်လာတဲ့ ကျေးဇူးသုံးခုကိုသာ နမူနာထည့်ပါမယ်။
၂။ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေ။ ဖြေပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာ။
၃။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ ကျမ ဘုရားတရားကို အရင်ထက် ပိုလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကံတရားပဲလို့တော့ ခံယူထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ပူတဲ့စိတ်လေးဝင် ဝင်လာတတ်လို့ပါ။
နှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်း တင်ဖြစ်တဲ့ပို့စ်လေးတွေက တိုတိုတိတိဆိုတော့ (ကလာရီဖီကေးရှင်း) လိုတာတွေပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ တိုမှသာရတယ်။ (တိုပြတ်) ဖြစ်ရမှာ (တိုပျက်) ဖြစ်နေတာကခက်တယ်။
မီဒီယာကတဆင့်သိရတာကိုဖတ်ပြီး တပုဒ်ရေးပါတယ်။ တချို့က အဲလိုအဲလိုမပြောပါလို့ဆိုလာတယ်။ ကျွန်တော်က မီဒီယာဆိုတာ အမြီးဖြတ်ခေါင်းတိ ရေးလေ့ရှိတာလည်း သိပါတယ်လို့ ပြောထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
တမာအကြောင်းလေးတွေ ရေးဖြစ်ပါတယ်။ လွမ်းတာတွေ တမ်းတာတွေသာမဟုတ်ပါ။ (မလိုတမာ) ပင် မစိုက်မိစေချင်တာကိုပါ သတိထားမိကြစေချင်တယ်။
အတော်ဆုံးဥယျာဉ်မှူးစိုက်ပျိုးထားတဲ့ခြံထဲမှာလည်း ပေါင်းမြက်မပေါက်ဖူးဆိုတာမရှိပါ။ သေချာရွေးထားတဲ့ မျိုးစေ့ထဲမှာတောင်မှ စုန်းပြူးဆိုတာ ပါတတ်တယ်။ ပါတော့လည်း မကောင်းတာကိုနှုတ်ပြစ်ရတယ်။
ဗမာတွေမှာရှိတဲ့ အယူအဆတခုက အငုံအဖူးကို လက်ညှိုးနဲ့ထိုးတာ မသင့်ပါတဲ့။ လက်ညှိုးကို ခေါက်ပြီးထိုးပြရတယ်။ အဲတော့ လက်ညှိုးထိပ်ဖျားက ကိုယ့်ဖက်လှည့်နေရော။
၂ဝဝ၃ ခုနှစ် မေလ (၃ဝ) ရက်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဘုတလင်မြို့မြောက်ဖက်၊ ဒီပဲယင်းမြို့နယ် ကြည်ရွာမှာ ဦးတင်ဦးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့နဲ့အတူလိုက်ပါလာသူတွေကို (နဝတ) စစ်အစိုးရကနေ ကြိုတင်စီစဉ်သတ်ဖြတ်မှုကြီး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပဲယင်းအရေးအခင်းလို့ လူသိများပါတယ်။ (ဒဗရင်း) လို့ အသံထွက်ရပါမယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့် စာအုပ်ထဲမှာ ဒီပဲယင်းလုပ်ကြံမှု အဓိကတရားခံသုံးယောက်လို့ပါတယ်။
(၁) ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ (ငြိမ်း)
၁၉၉၂ မှ ၂ဝ၁၁ အထိ နဝတ ဥက္ကဋ္ဌ။ OTS ကျောင်းဆင်း။ ၁၁-၇-၁၉၅၃ မှစပြီးအမှုထမ်း။ ၄-၁၁-၁၉၈၆ ဒုဗိုလ်ချုပ်။ ၄-၁၁-၁၉၈ ဗိုလ်ချုပ်။ ၂၇-၇-၁၉၈၈ ကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီး။ ၁၈-၉-၁၉၈၈ စစ်အာဏာသိမ်း ဒုခေါင်းဆောင်။ ၂၃-၄-၁၉၉၂ ဗခမကစောမောင်ကိုဖယ်ရှားပြီး ဥက္ကဋ္ဌလုပ်။
(၂) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်း (ကွယ်လွန်)
ယခင်ဝန်ကြီးချုပ် ၁၉-၁ဝ-၂ဝဝ၄ မှ ၁၂-၁ဝ-၂ဝဝ၇ အထိ။ ၁၉၆၅ မှာ DSA ကိုတက်ခဲ့။ ဗခမကသန်းရွှေရဲ့လူယုံ။ ၁၉၉၇ မှာ နဝတ တွင်း (၂) ဖြစ်လာ။ ၂ဝဝ၃ ဖေဖေါ်ဝါရီလမှာ တွင်း (၁) ဖြစ်လာ။ ၂ဝဝ၄ ဗခကခင်ညွန့်ကို ဖြုတ်လိုက်တော့ သူ့ကို ဝန်ကြီးချုပ်ခန့်။ အရင်က အနောက်မြာက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး။ စစ်ကိုင်း တဝတ ဥက္ကဋ္ဌ။ ၁၉၈၈ အရေးအခင်းကို နှိမ်နင်းစဉ်က ခြေလျင်တပ်ရင်းကို ကွပ်ကဲခဲ့။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ ပစ်ခတ်မှုကို အမိန့်ပေးခဲ့။ ၁၂-၁ဝ-၂ဝဝ၇ မှာ လူကီးမီးယားသွေးကင်ဆာနဲ့ သေဆုံး။ သူစင်္ကာပူဆေးရုံတက်နေစဉ် ၂ဝဝ၇ ဇန္နဝါရီလထဲ ဗခမကသန်းရွှေလာကြည့်။ သူမရှိတော့ အဲဒီအချိန်က အဆင့် (၅) နေရာမှာသာရှိတဲ့ ဗခကသိန်းစိန်က ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ဆက်ခံ။
ရဲမြင့် (၂) ယောက်ရှိတယ်။ ဒီပဲယင်းရဲမြင့်ကို ရဲမြင့်ကြီးလို့ ခေါ်ကြတယ်။ ဒီပဲယင်းဖြစ်တုန်းက ရဲမြင့်ကြီးက ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး၊ ၉ ကစထမှူး (ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှူး) ဖြစ်တယ်။ စရဖရဲမြင့် (ခ) ရဲမြင့်လေးက မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ (ဗိုလ်ချုပ်ရဲမြင့်အကြောင်း ဖြည့်ပြောပေးလို့ Thaung Yin Nagar ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။)
- ၁၉၆၂ ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦကို ဒိုင်းနမိုက်နဲ့ခွဲတဲ့တရားခံကို ဗခကနေဝင်းနဲ့ ဗမခအောင်ကြီးတို့က တယောက်အပေါ်တယောက် လွှဲချခဲ့ကြတယ်။ အလားတူပါပဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့်က ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှုမှာ မုံရွာ-ချောင်းဦးနားကနေ အမိန့်ပေးခဲ့တဲ့ စွမ်းအားရှင် (နောက်မှာ လက်ပတ်နီ) အဖွဲ့ကို မွေးထုတ်ခဲ့သူ ဦးအောင်သောင်းနာမည်ကို အဲဒီစာအုပ်မှာ ထည့်ထားတာမတွေ့ရပါ။
- မြန်မာပြည်က ဒီပဲယင်းအရေအခင်းကို နိုင်ငံတကာမီဒီယာမှာ Black Friday လို့သုံးပါတယ်။
- ၁၉၈၈ ကိုသတ်ဖြတ်နှိမ်နင်းခဲ့သူ ဦးစိန်လွင်ကိုတော့ Butcher of Rangoon ရန်ကုန်သားသတ်သမားလို့ နိုင်ငံတကာ မီဒီယာကနေ နာမည်ပေးထားပါတယ်။
- ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းကွယ်လွန်တော့ နေးရှင်းသတင်းစာကနေ Burmese premier, Butcher of Depayin မြန်မာဝန်ကြီးချုပ်၊ ဒီပဲယင်းသားသတ်သမားလို့ ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံ = နောက်တနေ့မှာ ရန်ကုန်ရှိ အမေရိကန်သံရုံးကလာကြည့်တော့ ဘာတခုမှမဖြစ်ခဲ့သလို ညတွင်းခြင်း သန့်ရှင်းထားပြီးသား တွေ့ရပါတော့တယ်။
တမာအကြောင်းလေးတွေ တိုက်ဆိုင်လို့ ရေးပြီးသားကို နည်းနည်းမွမ်းမံပြီး ပြန်တင်ပါရစေ။
နိုင်ငံတကာကသုံးသပ်သူတွေနဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ကနေ့ပစက္ခအပြောင်းအလဲတွေအပေါ် ကောက်ချက်ချတာတွေက မတူကြပါ။ နိုင်ငံတကာဆိုတာက ကျယ်ပြန့်လို သူတို့ကြားမှာလဲ ကွဲပြားတယ်။ အကျိုးစီးပွါးလဲ ခြားနားလို့ပါ။ မြန်မာနိုင်သားတွေထဲမှာ ကွဲလွဲတာက ရိုးရှင်းတယ်။ အဟောင်းသမားတွေက အဟောင်းကိုတသကြတယ်။ မဟောင်း-မသစ်တွေကလည်း အုပ်စိုးသူဘက်ကလိုက်ပါကြတယ်။ အဲတာမျိုးက ခေတ်တိုင်းမှာ ရှိတတ်တာပါ။ သခင်အားရလို့အထိ ကလိရင် ခံချင်ပါ့မလားမမေးနဲ့။ သူတို့ဟာ အပြုံးအရယ်မပျက်၊ အရှက်ဖက်နဲ့ ထုပ်ထားပြီးသူတွေဖြစ်တယ်။
အခုတခါ အရင်အုပ်စိုးသူဖက်လည်းမဟုတ်၊ အခုအုပ်စိုးသူလည်းမဟုတ်သူဆိုတာ ပေါ်လာတယ်။ ဘာတွေလည်း။ ဘယ်အစိုးရတက်တက် နိုင်ငံရေးလေ့လာသူ၊ နိုင်ငံရေးတက်ကြွသူ၊ မြန်မာ့ရေးရာကျွမ်းကျင်သူဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တွေနဲ့ လုပ်နေသူတွေလား။ အဲလိုမဟုတ်သူတွေကလည်း ပါသေးတာ။ ဘာတွေလည်း။
၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာ လူရွယ်တွေ ပါးစပ်ဖျားမှာ အရွေ့ဆိုတဲ့စကားလုံးမပါရင် ခေတ်မမီဘူး အထင်ခံရမှာစိုးလို့လားမသိ၊ အတော်ပြောခဲ့ကြတယ်။ အတော်နားကလောခဲ့တယ်။ ရူပဗေဒဝေါဟာရနဲ့ အမှတ်တခုကနေ တခြားအမှတ်တခုကို ရွေ့သွားတာကို အရွေ့လို့ခေါ်တယ်။ အဲတာက ၁၉၆ဝ ကျော်ကတည်းက သိပ္ပံဘာသာရပ်တွေကို မြန်မာမှုပြုစဉ်ကတည်းက သုံးနေတာပါ။ အရွေ့ကို ခေတ်စကားလို့ ထင်နေကြပုံရတယ်။
ဇီဝဗေဒအရလဲ သက်ရှိလောကကြီးဟာ တည်မနေပါ။ အမြဲရွေ့နေ၊ ပြောင်းနေတယ်။ ဟောင်းကျေ၊ သေသွားပြီး၊ အသစ်တွေဖြစ်လာနေတယ်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကလဲ အဟောင်းနေရာမှာ အသစ်တွေဝင်လာနေတာ မရပ်မနားဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကအပြောင်းအလဲဟာ အရင်ငါးနှစ်မှာ ရုပ်ပြောင်းလဲခြင်းသာဖြစ်ပြီး၊ ဓါတ်ပြောင်းတာမဟုတ်ပါ။ အခုတော့ မျိုးစေ့ပါပြောင်းရမယ်။
တမာမျိုးကနေ အခါးသစ်၊ ငရုပ်မျိုးကနေ အစပ်သစ်သာဖြစ်လာနိုင်တယ်။ မျိုးရိုးဗီဇဆိုတာ ပြောင်းမရပါ။ ချိုတာလို တမာကိုထပ်မစိုက်ပါနဲ့။ မြန်မာပြည်သူတွေ ခါးသီးတဲ့ဘဝတွေက လွတ်မြောက်ကြပါစေ။ မလိုတမာတွေကို ပြောတာပါ။
ဒေလီကထွက်လာကတည်းက အတူတူမထွက်ရတာကြာလို့တဲ့။ ဒုတိယတိုင်းပြည်ကအစားအစာ သွားစားကြသတဲ့။ ကျွန်တော်က မဆလာမကြိုက်တာမို့ ပါမသွားဘူး။ မြန်မာပြည်မှာနေခဲ့တုံးကတော့ ကုလားဟင်းကို မုံရွာနဲ့ မန္တလေးမှာ မကြာမကြာသွားစား၊ ဝယ်စားပါတယ်။ အိန္ဒိယကမဆလာကိုတော့ မလွဲသာမရှောင်သာ အစည်းအဝေးတွေမှာ ဖိုင်စတားကဖြစ်ဖြစ် အောင့်အီးသည်းခံစားခဲ့ရတယ်။ သူတို့ဆီက ဒန်ပေါက်လည်း ကောင်းတဲ့ဆိုင်ကသာ ကောင်းတာ။ ဟိုက်ဒရာဘဂ်ကတော့ နာမည်ကြီးတယ်။ ရိုတီး ခေါ်တာကိုတော့ ကိုယ့်အိမ်ကချက်တဲ့ ပဲဟင်း၊ အသားဟင်နဲ့စားပါတယ်။ ဗီကပ်စ်ပူရီ ကြာသပတေးညဈေးကို အမှတ်ရတယ်။ ဒေလီမှာ ကျန်ရစ်သူတွေ ကျန်းမာကြပါစေ။
ကျွန်တော့်ပို့စ်တခု = Guidelines for Vaccinating Pregnant Women ကိုယ်ဝန်နှင့် ကာကွယ်ဆေး
ကွန်မင့် (၁) Sarah Khin Lay စိတ်ကိုများ ထိုးဖောက်မြင်တတ်သလား မသိပါဘူး။ အခုရေးတင်တာလေးက သမီး ဒီနေ့ အရမ်းသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာမို့ ကျေးဇူးပါရှင့်။ ဆရာလဲ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပါစေ။
ကွန်မင့် (၂) Thinzar Kyaw ဟုတ်တယ်ညီမရေ။ ဆရာ့ကို မေးရမယ်လို့ စဉ်းစားမိတိုင်း အဲဒီနေ့မှာ ကိုယ်မေးချင် သိချင်တဲ့ ပို့စ်တက်လာတယ်။
Tint Swe ဆရာလည်း ဆုံ-စုဖြစ်တတ်တဲ့သဘောကို မေးခွန်းနေကနေတဆင့် သိလာရတယ်။
တရက်တည်းမှာ အဲတာနဲ့တင်မပြီးသေးပါ။ အခု ဆက်တိုက်လာတဲ့ မေးခွန်းနှစ်ခုက သည်လို့့
မေးခွန်း (၁) အသက် ၃၅၊ မ။ သမီး ၃ ယောက်ခွဲမွေးထားပါတယ်။ နောက်ကလေး ယောက်ျားလေးလိုချင်လို့ပါ။ ဆေးနည်းလေးများရှိမလား သိချင်လို့ပါ။
မေးခွန်း (၂) ဆရာရှင့် သမီးအသက်က ၂၉ နှစ်ပါ။ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်ဆရာ။ လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်က သမီးမိန်းကလေး တယောက် မွေးထားပါတယ်။ ခုနောက်ထပ် ယောက်ကျားလေးတယောက်လောက် ထပ်လိုချင်လို့ပါဆရာ။ ဘယ်လိုနည်းလမ်းများနဲ့ လုပ်ဆောင်ရပါမလည်း သိချင်လို့ပါဆရာရှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
အဲဒီဆေးပညာစာကိုတော့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာတင်ဘို့မသင့်လို့ မေးတဲ့သူတွေဆီ တိုက်ရိုက်ပို့လိုက်ပါတယ်။
ကျန်မာရေး တယောက်မေးတာကို နောက်တယောက်ကလည်းမေးလာတာမျိုး ခဏခဏကြုံရတယ်။ ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရ အကြောင်းလေးပါးရှိတော့ အတူနေထိုင်ကျင်လည်ရသူတွေမှာ ဝေဒနာတူရှိတတ်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ အေးအတူပူအမျှရှိကြရမယ်။ မှောင်မှောင်လင်းလင်း တပြည်ထဲသားချင်း စည်းလုံးချစ်ကြည်ကြရမယ်။ ခြောက်ခြောက် စိုစို၊ စိုသောလက်တွေ မခြောက်ကြစေနဲ့။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အသွေးတူ အမွှေးတူတွေဖြစ်ကြတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မဲဆောက်မြို့က ဒေါက်တာဆင်သီယာမောင်ရဲ့ဆေးခန်းမှာ လူနာဆောင်သစ်ဖွင့်ပွဲသတင်းသိရတယ်။ (မယ်တော်) ဆေးခန်းလို့ နှုတ်ကျိုးခေါ်ပေမယ့် ထိုင်းလို (မယ်တာအို) သံထွက်ရတယ်။ ဒါလည်း မြန်မာစာလုံးပေါင်းမို့ပါ။ တိတိကျကျကြီး သည်အတိုင်းအသံထွက်ရတာတော့ မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံရေးအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံကို အခေါက်ပေါင်းများစွာရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကနဦးနှစ်တွေက မာနယ်ပလောအထိ သွားရတယ်။ မာနယ်ပလောကျပြီးနောက်ပိုင်းမှသာ မဲဆောက်ကို သွားရတာပါ။ မဲဆောက်ရောက်တိုင်း ဒေါ်ဆင်သီယာဆေးခန်းအထိ ရောက်တာများတယ်။
ကျွန်တော်က ရောက်တဲ့အရပ်မှာ လူနာရှာတယ်။ ရှာတော့လည်း ခွဲစိတ်လူနာ။ ကွယ်လွန်သူ ဗိုလ်ချုပ်မြမွေးတဲ့ရွာက ဆေးရုံမှာ ရင့်မာနေတဲ့ကိုယ်ဝန်အရွယ်အစားလောက်ရှိတဲ့ မျိုးဥအိမ်အလုံးကြီးကို ခွဲပေးခဲ့ဘူးတယ်။ ကျည်ဆံမှန်ခံရတဲ့ လူနာတယောက်ကို လည်ပင်းဖေါက်ပေးရတယ်။ မျိုးဥအိမ်အလုံးလူနာအမျိုးသမီးကြီးက ကောင်းသွားပေမယ့် ကျည်ဆံမှန်တဲ့ကရင်စစ်သား သိပ်မကြာခင်ကွယ်လွန်သွားတယ်။ ဆောရီး။
ဒေါ်ဆင်သီယာဆေးခန်းမှာတော့ ၄-၅-၆ ယောက်ခွဲပေးဘူးတယ်။ အူကျနဲ့မုတ်ပါတွဲရှိနေတဲ့လူနာတယောက်ကိုခွဲတော့ ကရင်ဆေးမှူးတဦးက (အဆစ်စ်) လုပ်ပေးတယ်။ အဲဒီဆေးမှူးက အခု KNU မှာ ထိပ်ပိုင်းမှာ တာဝန်ယူနေရတယ်။
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် တောစခန်းတွေမှာ အစည်းအဝေးတွေလုပ်တိုင်းလည်း ချောင်းဘေး မြောင်းဘေးတွေမှာပါ (မိုင်နာ) ခွဲစိတ်စရာတွေကို ခွဲစိတ်ပေးခဲ့ဘူးတာ ခုထိအမှတ်ရသေးတယ်။ အခုတော့ ခွဲစိတ်ခန်းတွေ၊ ခွဲစိတ်လူနာတွေ၊ ခွဲစရာတွေ အားလုံးနဲ့ ခွဲခဲ့ရပြီကောဗျာ။
ဓါတ်ပုံ = ၁၉၉၃ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ် (ယိုဇိုယိုကိုတာ) လာစဉ်က NLD/LA ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် ထိုင်းနယ်စပ်တနေရာမှာ သွားရောက်တွေ့စဉ်က ကရင်ဒုက္ခသည် လူနာများကို ဆေးဝါးကုသပေးခဲ့ရစဉ်က
ဆရာခင်ဗျား အမျိုးသမီးက ၂၅ နှစ်ပါ။ Marvelon 28 တားဆေးသောက်ပါတယ်ဆရာ။ မျှားအတိုင်းသောက်ရာမှာ ၇ ပြီးတော့ ၈ သောက်ရမှာကို ၁၄၊ ၁၃၊ ၁၂ ထိမှားသောက်မိပါတယ်ဆရာ။ ၁၁ ရောက်မှ မှားမှန်းသိပါတယ်။ မှားတဲ့အတိုင်း ၁၁၊ ၁ဝ၊ ၉၊ ၈ ပြီးတော့ ၁၅၊ ၁၆ ကနေ ၂၈ ထိ ဆက်သောက်ရမှာလားဆရာ။ ကဒ်သစ်ဝယ်ပြီး ၁၁ သောက်ပြီးတော့ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅ စသည်ဖြင်၂၈ ထိ ဆက်သောက်ရမှာလားဆရာ။ ပထမတန်းမှာရှိတဲ့ဆေး ၇ လုံး၊ ဒုတိယတန်းမှာရှိတဲ့ ဆေး ၇ လုံးတို့က အာနိသင်အတူတူပဲလားဆရာ။ လေးစားစွာဖြင့် ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်ဆရာ။ ကျေးဇူးပါဆရာ။
(မြား) လို့ရေးရတယ်။ ဆေးကပ်-ဆေးဆိုင်တွေကပါ မှားရေးကြတယ်။ ကိုယ်ဝန်တားစားဆေးတွေမှာ ဆေးအရောင်တူရင် ဆေးလည်းတူတယ်။ သောက်လို့ရတယ်။ မြားပြထားတာက နေ့မလွဲအောင် (တနင်္ဂနွေ-တနင်္လာ) မှတ်ရတာ လွယ်ဘို့သာ ဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ တချို့က လက်ညှိုးကပ်ခေါ်တယ်။ တချို့က မြားကပ်လို့ ခေါ်ကြတယ်။ အိုကေနာမည်နဲ့ စားဆေးရော ထိုးဆေးရောရှိပုံရတယ်။ ကျွန်တော် သိပ်မသိပါ။
တကမ္ဘာလုံးမှာ အမျိုးသမီးကြီးငယ် သန်းပေါင်း ၁ဝဝ သုံးနေကြတယ်။ နောက်ပေါ် စားဆေးထဲမှာ အဟောင်းတွေထက် ဟော်မုန်းလျှော့ထည့်ထားလို့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေ နည်းစေတယ်။ ထိရောက်မှုလဲ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဆေး အမျိုးမျိုးရှိတယ်။
၁။ ဟော်မုန်းနှစ်မျိုးတွဲ စားဆေးများ
လူအများဆုံးသုံး၊ ဝယ်လို့လဲလွယ်၊ ဈေးလဲမကြီးဘူး။ နာမည်တွေ များတယ်။ (အီစထိုဂျင်) နဲ့ (ပရိုဂျက်စတိုဂျင်) ဟော်မုန်း နှစ်မျိုး ပူးတွဲပါတယ်။ မ-မျိုးဥအိမ်ကနေ လတိုင်း ထွက်ရမဲ့ မ-မျိုးဥ ထွက်မလာအောင် တားဆီးပေးတယ်။ သားအိမ်အဝရှိတဲ့ ချွဲရည်ကို ထူပြစ်စေတာမို့ မ-မျိုးဥ ထွက်စေအုံးတော့ သုက်ပိုးနဲ့တွေ့ဘို့ ခက်ခဲစေပြီး၊ သားအိမ်အတွင်းနံရံကို ပါးစေတာကြောင့်လည်း သန္ဓေဟာ သားအိမ်မှာ လာမကပ်နိုင်ဘူး။
လစဉ်ရာသီ စတင်လာတဲ့နေ့ကစ ဆေးသုံးရမယ်။ တကပ်မှာ ၂၈ လုံးပါတယ်။ ၂၁ လုံးက အရောင်တမျိုး၊ ၇ လုံးက အရောင်တမျိုး။ ၂၁ ရက်ကြာ နေ့တိုင်း ၁ ပြား သောက်ပါ။ နောက်ဆုံးသောက်ရမဲ့ အရောင်မတူတဲ့ ဆေးပြား ၇ ပြားဟာ အားဆေးသာဖြစ်တယ်။ အဲဒီ ၇ ရက်အတွင်း သွေးပြန်ဆင်းမယ်။ သွေးဆင်းတာ နည်းမယ်။ ရက်လည်း တိုမယ်။ သွေးဆင်းရက်မှန်မယ်။ ရာသီမလာခင်ဖြစ်တတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေ နည်းတယ်။ ဝက်ခြံ၊ အလုံး-အကျိတ်၊ ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဘို့ မဟုတ်တာအတွက်လဲ သုံးနိုင်တယ်။
နေ့တိုင်း သောက်တာမှန်ရင် ၉၉% စိတ်ချရတယ်။ ရာသီသွေးဆင်းတာ မများဘူး။ ရက်မှန်တယ်။ ရာသီလာလို့ နာတာ သက်သာတယ်။ မလာခင်ဖြစ်ချင်တာတွေလဲ သက်သာတယ်။ မျိုးဥအိမ်-ကင်ဆာ၊ သားအိမ်-ကင်ဆာ အဖြစ်နည်းတယ်။ မျိုးဥအိမ်-အကျိတ် နဲ့ ရင်သား-အကျိတ်ဖြစ်တာ နည်းတယ်။ တင်ပါးဆုံတွင်းရောဂါ အဖြစ်နည်းတယ်။ ဝက်ခြံထွက်တာ သက်သာတယ်။ သားအိမ်ပြင်ပ-သန္ဓေတည်တာ နည်းတယ်။ Endometriosis ဖြစ်နေလို့ ခံစားရတာတွေလဲ နည်းစေတယ်။ အပျိုတွေကိုလဲ ရာသီမှန်အောင်ပေးတယ်။
ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ = ခေါင်းကိုက်၊ ပျို့-အန်၊ ကြားရက်သွေးဆင်း၊ ရင်သားတင်း၊ ရှားရှားပါးပါး သွေးဖိအားတက်တာ၊ သွေးခဲတာ၊ သားအိမ်အဝ-ကင်ဆာတို့ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေရင်၊ အသက် ၃၅ ကျော်ရင်၊ အဝလွန်ရင်၊ သွေးခဲတတ်တဲ့ရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ ရင်သားကင်ဆာ၊ (မိုင်ဂရိန်း) ရောဂါ၊ အသည်း-သဲခြေရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ ရှိနေရင် မသုံးသင့်ပါ။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ = ပျို့-အန်၊ ခေါင်းကိုက်၊ ရင်သားတင်း-နာ၊ လိင်စိတ်နည်း၊ ခေါင်းမူး၊ ဆေးစသောက်ဘူးသူတွေ တလ၊ နှစ်လမှာ ရာသီရက် မမှန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ရှားရှားပါးပါး ဖြစ်နိုင်တာတွေကတော့ သွေးဖိအားတက်၊ နှလုံး၊ သွေးကြောပိတ်၊ အသည်းကင်ဆာ၊ သည်းခြေအိတ်ကျောက်တွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ ဒီဆေးမျိုး မသုံးသင့်သူတွေကတော့ သွေးကြောပိတ်ရောဂါဖြစ်ဘူးသူတွေ၊ အသက်ကြီးသူတွေ၊ သွေးတိုးများသူတွေ၊ (မိုင်ဂရင်း ရောဂါရှိသူတွေ၊ အသည်း မကောင်းသူတွေနဲ့ မသင့်ဘူး။
၂။ Progestogen-only pill (POP) ဟောမုန်းတမျိုးတည်းပါစားဆေး
ပရိုဂျက်စတီရနုး ခေါ် မ-ဟော်မုန်း တမျိုးတည်းပါတဲ့စားဆေး ဖြစ်တယ်။ Minipill လို့လဲခေါ်တယ်။ အမျိုးအစား အမျိုးမျိုး ရှိတယ်။ သားအိမ်အဝရှိ ချွဲကျိတဲ့အရည်က ပြစ်စေးလာလို့ သုက်ပိုးကို သားအိမ်ထဲ မဝင်စေအောင် တားတယ်။ သားအိမ် အတွင်းသား နံရံကို ပါးလွှာစေလို့ သန္ခေဥ တွယ်ကပ်တာကိုလည်း တားတယ်။ သတိထားသုံးရင် ၉၉% ထိရောက်တယ်။ ရာသီ စဆင်းတဲ့ရက်ကစပြီး တနေ့ ၁ ပြားသောက်ပါ။ နေ့တိုင်း သောက်နေကျအချိန်မှာ အချိန်တူသောက်ပါ။ ဆေးကပ်တခု ကုန်ရင် နောက်ကပ်သစ်တခု စသောက်ပါ။ ရာသီက ၂ လမှ တခါသာလာမယ်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်-ဖျက်သူတွေလဲ သွေးဆင်းတဲ့ ပဌမရက်နေ့မှာ ဆေးပြားစသောက်ပါ။
ခါတိုင်းဆေးသောက်ချိန်ထက် ၃ နာရီ နောက်ကျသွားရင် ၄၈ နာရီအတွင်း အတူမနေပါနဲ့။ နေဖြစ်ရင် အရေးပေါ်တားဆေး သောက်ပါ။ တရက်နောက်ကျသွားရင် နောက်ရက်မှာ ဆေး ၂ လုံး သောက်ပါ။ ၄၈ နာရီ အတူမနေပါနဲ့။ ဒါမှမဟုတ် (ကွန်ဒွမ်) သုံးပါ။ ဆေးတကပ် ကုန်တာနဲ့ ရာသီ လာလာ-မလာလာ၊ နောက်ဆေးတကပ် ဆက်သောက်ပါ။ အတူမနေဖြစ်သေးလဲ ဆက်သောက်ပါ။ ၁-၇ ရက်အထိ နောက်ကျရင် (ကွန်ဒွမ်) သုံးပါ။ ဆေးသောက်ပြီး ၂ နာရီအတွင်း အန်ရင် နောက် ၁ လုံးသောက်ပါ။
၃။ Emergency contraceptive pill အရေးပေါ်တားဆေး
FDA က အသိအမှတ်ပြုဆေးတွေက Plan B, Next Choice, Plan B One-Step နဲ့ Ella တွေ ဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ Ecee-2 လို့မေးခွန်းမေးသူတွေဆီကနေသိရတယ်။ ပဌမဆေးလုံးကို အကာကွယ်မဲ့အတူနေပြီးတာနဲ့ မြန်မြန်သောက်ပါ။ နောက်ထပ် ၁၂ နာရီအကြာမှာ ဒုတိယဆေးလုံး သောက်ပါ။ အကာကွယ်မဲ့အတူနေပြီး ၇၂ နာရီ (၃ ရက်) အတွင်းမှာ သောက်ရင် ကာကွယ်နိုင်တယ်။ ၁၂ဝ နာရီ (၅ ရက်) အထိလဲ သုံးနိုင်ကြတယ်။ % ပြည့်တော့မဟုတ်ပါ။ မျိုးဥထွက်မှာကို တားပေးတယ်။ သားအိမ်အတွင်းဆုံးလွှာကိုလဲ သန္ဓေတွယ်ကပ်မှု မဖြစ်နိုင်အာင် ပြင်ပေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သန္ဓေဖြစ်နေပြီ (ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီ) ဆိုရင်တော့ ဆက်ကြီးထွားမှာကို မတားနိုင်ဘူး။ ၈၉% ထိရောက်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေရင်လဲ ဆက်ယူလို့ ကလေးကိုမထိခိုက်စေဘူး။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက တခြား ဟော်မုန်းပါတားဆေးတွေနဲ့ အတူတူဘဲ။ အရေးပေါ်ဆေးသာဖြစ်လို့ ခဏခဏမသုံးသင့်ပါ။ ခဏခဏသုံးရင် ဘာဖြစ်မလည်းဆိုတဲ့ ဆေးသုတေသန မစုံသေးပါ။ သူများတိုင်းပြည်တွေမှာ အဲလိုအရေးပေါ်ကို ခဏခဏမသောက်လို့ သုတေသန လုပ်ထားတာမရှိပါ။ သေချာတာက ဟော်မုန်းတွေပြောင်းမယ်။ ရာသီတွေပြောင်းမယ်။ နောင်ဘာဖြစ်မလည်းတော့ မပြောနိုင်ပါ။
အိပ်ယာထရင် ညကလာတဲ့ (ကွန်မင့်) တွေကိုလိုက်ဖတ်ရတဲ့အလုပ်နဲ့ စပါတယ်။ ကနေ့ အတော်မချောင်ပါ။ ခုထိ မပြီးနိုင်သေးဘူး။ အများဆုံးက One-Sided Arguments မဟာအမှားကြီး၊ ဧရာဝတီသတင်း = စင်ကာပူဖိုရမ်တွင် အစိုးရသစ်အား ဝေဖန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကွန်မင့်တွေထဲမှာ ဒီ (၂) လည်းပါလို့ လင့်တွေလိုက်ရှာရသေးတယ်။
လရောင် ထွန်း ကိုတိုင်မကြားရလို့မယုံပါ
Soe Naing ဟုတ်တယ် ညေး။ ကွီးလည်း ယုံဘူး။
Time: 08.30 am - 5.15 pm
This one-day Forum will engage Myanmar country specialists, business and government practitioners with an international audience of public and private sector actors interested in Myanmar’s development, to discuss the road ahead for Myanmar in 2016 and beyond. The Forum’s value over other discussions on Myanmar lies in the informed assessment by those involved in various aspects of the country’s reforms, and their candid discussion of the challenges it faces. The Forum will beapublic event, open to registration by members of government, academia, research, business and civil society.
Photo: The5panels and the dialogue session in action. (Source: ISEAS – Yusof Ishak Institute)
ဒါလည်း တချို့တွေက ယုံသေးဘူးပြောအုန်းမှာလည်း သိပါရဲ့။
Ripley's Believe It or Not! ဆိုတာ အမေရိကန်နိုင်ငံသား (ရောဘတ် ရစ်ပလေ) ကနေတည်ထောင်ထားတဲ့ နာမည်ကြီး အစီအစဉ်တခုပါ။ နားလည်ရခက်တဲ့၊ မယုံနိုင်လောက်တဲ့၊ ဟုတ်ပါ့မလားထင်နိုင်တဲ့ တကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေကို မှတ်တမ်းတင်းရိုက်ကူးထားတယ်။ ရေဒီယို၊ တီဗွီ၊ အတွဲလိုက်စာအုပ်တွေ၊ ကာတွန်းစာအုပ်တွေနဲ့ ပြတိုက်တွေဆိုပြီး ရှိတယ်။ ဓါတ်ပုံပေါင်း (၂ဝ,ဝဝဝ)၊ အပိုင်းအစပေါင်း (၃ဝ,ဝဝဝ) နဲ့ ကာတွန်း (၁ဝဝ,ဝဝဝ) ပါတယ်။ (အိုလန်ဒို) မှာရှိတဲ့ Ripley Entertainment, Inc. ကို တနှစ်မှာ လူပေါင်း (၁၂) သန်းလာကြည့်ကြတယ်။
Swe Swe Nwe CNA က မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေးပွဲ လွှင့်တာကြည့်လိုက်ရတယ်။ ရိုဟင်ဂျာအရေးဖြစ်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပါ။ ဒေါက်တာတင်မောင်မောင်သန်းနဲ့ မြန်မာပြည်က နာမယ်ကြီးဂျာနယ်တစောင်ရဲ့ အယ်ဒီတာလဲ ပါတယ်။ CNA က ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်စု ဘာလို့ ရေငုံနူတ်ပိတ်နေတာလဲ၊ ဘာလို့ ဒီ ဓါးစာခံတွေအတွက် ရပ်တည်မပေးတာလဲတဲ့။ အယ်ဒီတာလုပ်စားတဲ့သူက CNA လိုချင်တဲ့အတိုင်း ဒေါ်စု ငြိမ်မနေသင့်ပါဘူး။ ဒီလူတွေအတွက် တခုခုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်လို့ဖြေပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ပြင်သစ်အမျိုးသမီးက ဒေါ်စုရဲ့ ဘေးကျပ်နံကျပ် အခြေအနေကို ရှင်းပြဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ CNA ကဇွတ်အတင်းဖြတ်ပြီး ဗမာတွေကိုပဲဖြေခိုင်းပါတယ်။ ဒေါက်တာတင်မောင်မောင်သန်းက သူက နိုင်ငံရေးသမားပဲလို့ဖြေပါတယ်။ စဉ်းစားမိတယ်။ နိုင်ငံခြားသူကတောင် အမေစုအခြေအနေကို နားလည်နိုင်ပြီး ဗမာတွေကဘာလို့များ ဒေါ်စုကို ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက် ရပ်တည်မပေးရကောင်းလားဆိုပြီး ဝေဖန်ကြ၊ တိုက်ခိုက်ကြ။ ပြည်တွင်းကဗမာတွေက ရိုဟင်ဂျာတွေကိုပဲ မျက်နှာသာပေးတယ်ဆိုပြီး ဆဲကြဆိုကြ။ အမေစု နောင်ဘဝမှာများ လူဖြစ်ခဲ့ရင် မြန်မာပြည်နဲ့ဝေးရာမှာ မိသားစုစုံစုံညီညီနဲ့ ဘဝတခုပိုင်ဆိုင်ပါစေ။
Dr. Tint Swe အော့့် တချို့လူတွေက ပြည်ပမှာဖြစ်ဖြစ် ဗိုလ်လိုပြောရတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်တိုင်းပြည်အခြေအနေကို ဝေဖန်ရတာကို ဂုဏ်ယူနေကြပုံရတယ်။ နာမည်ကြီးသူကို ဆန့်ကျင်ပြောရဲတာကိုလည်း သတ္တိလို့ထင်ကြပုံရတယ်။ တခါက အဲဒီအုပ်စုထဲကပါပဲ ဒေလီမှာလာပြောတယ်။ စစ်အစိုးရကစီမံတဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်ကို သဘောမတူတာ မှားတယ်တဲ့။ အားလုံးသဘောတူရင် မြန်မာပြည်ကြီး ငြိမ်းချမ်းရေးရမယ်တဲ့။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအစိုးရတက်တော့ အားလုံးလက်မှတ်ထိုးကြရင် ငြိမ်းချမ်းရေးရမှာတဲ့။
တချို့က ဗိုလ်လိုပြောရရင် ဗိုလ်စကားပြောသူတွေအကြိုက်ပဲ လိုက်ရမယ်များထင်နေကြသလား မပြောတတ်ဘူး။ ကျွန်တော်က အင်္ဂလိပ်စာညံ့ခဲ့လို့ အတင်းကြိုးစားတာ အဲလိုဟာတွေကို ပြိုင်ငြင်းချင်လို့ပါ။ အင်္ဂလိပ်လိုသာသုံးရတဲ့ စင်မြင့်တွေမှာ ကျွန်တော်ရေးခဲ့ပြောခဲ့တာတွေထဲက A War foraName နာမည်တလုံးအတွက်စစ်ပွဲ (ရိုဟင်ဂျာကိစ္စ) နဲ့ Sanctions မြန်မာနိုင်ငံနှင့် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ပြဿနာ (အမေရိကန်ဆန်ရှင်) အကြောင်းနှစ်ခုအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားရတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘယ်သူလာလာခံငြင်းတာပဲ။
- A War foraName နာမည်တလုံးအတွက်စစ်ပွဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/a-war-for-name.html
- Sanctions မြန်မာနိုင်ငံနှင့် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု ပြဿနာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/sanctions_8.html